Umbuzo FSX Nawe
iminyaka 2 5 izinyanga ezedlule #66 by Gh0stRider203
Iyiphi indlela engcono uthole ukwazana kuka ukuxoxa lokho esikwenzayo nalokho FSX, angithi?
KUPHELA 2 imithetho. akukho ukuphikisana (uma kunenkinga niwayise kwenye indawo, SICELA); futhi akukho ukwenza fun yabanye UKUXHUMANA ukuba izindiza esizeni Rikoooo BakaJehova ayigcinanga nje ngokukhuthaza, mina SIYAKWAMUKELA KUBO! Ngiyakuthanda usuhamba izindiza ahlukahlukene! Have kusukela ngineminyaka a kid.
Kepha Mina ....... Ngingumfana CEO of American Airways VA. Ngichitha isikhathi sami esiningi ku FSX ukwenza wezimpahla eside hola njengoba yilokho okwenza Airline imali kakhulu. Wonke amaqembu aphezulu ohlwini izinyoni 2 mina fly kukhona 747-800F futhi 747LCF. Sinawo yemikhumbi eminingi Nokho ezinobukhulu obuhlukahlukene.
Omncinyane ngicabanga yilona Dash Eme 8-100 Nefa Embraer 600.
Largest Ngicabanga obungenza kube 747s, futhi 707-320, kanye 777-200LR.
Okudala kakhulu yayiyoba Boeing 314 futhi 707-320
Esheshayo yayiyoba Concorde, ngaphandle umbuzo. (Uwuchaze "Charlie", Ngingumfana "ngeke bajabule ngaphandle kokuba [Ngithathe] uya Mach-2 nezinwele [wami] ngomlilo" lol)
Iphansi ngokungangatshazwa V-22, futhi CH-47, okuyinto thina kuphela zisebenzisa i-flying abasebenzi Amafutha Rig out Rig (boring ngempela, kodwa ngokushesha uma usebenzisa Heh nengqungqulu)
Intandokazi yami siqu? Yilokho enye ezinzima. Ngizoba ukusho 707-320 kanye C-130.
Ngivame kangakanani fly? Nokho, ukuba qotho .... cishe non-stop. Kuze kube manje kule nyanga, Ngiye ngemvume 461.39 amahora, futhi 206,931
Lapho hhayi flying ngokuba Airline, ngizobuya ngokuvamile flying Tomcat.
Ezinye isixhumanisi ezinye izinyoni Rikoooo ngisebenzisa
B747-XXX iphakethe Mega (ngisebenzisa LCF kusukela kule - noma nginomsebenzi YONKE megapacks 747 efakwe lol)
NOMA UMA ufuna le LCF ...
B737-700 American Airlines (HHAYI okwamanje izimoto zethu kodwa anginalo selikhona futhi LOVE IT)
B777-200 (ngenkathi Angazi sebenzisa noma isiphi kwabangcwele kule iphakethe .... ANGIFUNI ngincoma ke!)
B707-42 (ngisebenzisa uKaputeni Sim version, kodwa uzobe ezama lokhu elilodwa kuleli sonto! Hlala ubhekile A UKUBUYEKEZWA!)
iminyaka 2 5 izinyanga ezedlule - iminyaka 2 5 izinyanga ezedlule #69 by Dariussssss
Ngingathanda ukucela izinto ezimbalwa. empeleni Okokuqala yiphutha ebonisa ukuthi ngemva ngazama ukufaka Sim Giants Gran Canaria kwenkundla. Iphutha Ukubukeka kwendawo endaweni (ngokuhlukahluka okuthile kweminye inombolo) akatholakali. Lelo fayela kwenkundla akusebenzi ngaso sonke ku FSX yami sp2. Kukhishwe ke kodwa iphutha sisekhona.
Okwesibili. Kungenzeka yini ukuba uhlangane VC kusukela A320 Umkhaya multi-livery iphakethe, ne Thomas Ruth A330 / 340 futhi kanjani? Bobabili kulayishiwe kusuka lapha.
Ukuhlela kokugcina: iminyaka engu-2 izinyanga ezingu-5 ezedlule Dariussssss.
iminyaka 2 5 izinyanga ezedlule #72 by rikoooo
Ngiyabonga Gh0stRider203 ngoba uthumele, siyazi ukuthi kancane manje, futhi siyakwamukela njengoba umengameli on the forum.
Dariusssss: Ukuze ususe iphutha nje ukususa indawo kusuka kulabhulali yakho kwenkundla e FSX Uhlel. Ngiyakuphemba look indawo ukuhlola uma kukhona iphutha nge isifaki. is kuphela kwenzekani nge Grand eCanary noma ezinye sceneries kakhulu?
ngoba umbuzo wakho wesibili, yebo Ngicabanga ungakwazi uhlangane VC kusukela A320 Umkhaya multi-livery iphakethe, ne Thomas Ruth A330 / 340. Ukuze wenze ukuhlanganisa VC sicela uhlole ne-Google noma Youtube tutorials
iminyaka 2 5 izinyanga ezedlule #73 by Dariussssss
Ukuthi ufuna kwenkundla izindawo 117 futhi 123. Bobabili awekho. Ngo scenery.cfg, zinyanga kwenkundla ndawo 115-Engeza ku Ukubukeka kwendawo, akusiwona khona nhlobo, kodwa iphutha oqhubeka ezizayo. Lokho ifayela kwenkundla kuphela eyenza izinkinga, kuze kube manje.
Futhi, BN-2 Island I-FSX ikhwelwe kabi ngobugebengu.
iminyaka 2 5 izinyanga ezedlule #95 by Dariussssss
Ngemva kokuzama uhlangane VC okukhulunywa kanye Thomas Ruth A330, umphumela kwaba pretty ezimbi. Kwadingeka ukususa omunye A330s, bekubonakala kabi ngobugebengu. Angifuni ukuba sininika umqondo ukuze uhlangane ukuthi kodwa, Angikwazi ukuthola iyiphi indlela yokukwenza.
iminyaka 2 5 izinyanga ezedlule #97 by Gh0stRider203
Dariussssss wabhala: Ngemva kokuzama uhlangane VC okukhulunywa kanye Thomas Ruth A330, umphumela kwaba pretty ezimbi. Kwadingeka ukususa omunye A330s, bekubonakala kabi ngobugebengu. Angifuni ukuba sininika umqondo ukuze uhlangane ukuthi kodwa, Angikwazi ukuthola iyiphi indlela yokukwenza.
guys c'mon..you're derailing ngentambo wami lapha
probs Tech Ulapha: www.rikoooo.com/board?view=topic&catid=5&id=34
iminyaka 2 5 izinyanga ezedlule #99 by Dariussssss
Kulungile sorry, kubi yami.
iminyaka 2 5 izinyanga ezedlule #130 by Gh0stRider203
Dariussssss wabhala: Kulungile sorry, kubi yami.
No Worries indoda yami, mina banokuningi izindiza ungakwazi geza wax lol
iminyaka 2 5 izinyanga ezedlule #177 by FCAIR
Sawubona konke, I am a umhlala USAF nezisebenzi abakhulu / I fly ikakhulu amacansi aka Military Air Service ezokuthutha / C97 iyona Plane engizithandayo. Ngiphinde fly Reeve AA izindiza yonkana Alaska futhi iziqhingi Aleutian esijwayelekile I Lockheed L-I88 Electra Ingabe kude izindiza engilithandayo in the ezinkulu enyakatho ekude. Ngingu super fan Convair B-36, The B-58 Hustler best looking Bomber wake ukundiza / kanye Commercial 880 / 990 enhle izindiza okusheshayo. Ngenza fly Capsim 707 & 727 amangalisayo izengezo kahle isikhathi sethu kikho. I kuphela amahora mayelana 80 ku sim kuze kube namanje ukufunda nokuzijayeza osondela sonke isikhathi ..
iminyaka 2 5 izinyanga ezedlule #183 by Gh0stRider203
Okokuqala off FCAIR .... siyabonga isevisi yakho ezweni lethu kuwe. Umkhaya wakithi uye wakhonza ngenxa 6 izizukulwane manje, njalo ezindabeni cishe legatsha kodwa Coast Guard. Awekho amazwi wake baveze ngempela ukwazisa kwami ​​kuwe. Ngangifuna ukukhonza, kodwa kuyadabukisa ukuthi, ukuthi kungagcini Civil Air Patrol (ngangiwujabulela kuze kube Heh ukuphela).
Ngiphinde got CS 707 futhi LOVE wakhe. Ukuqala 'er kuze yinto Angizange ngempela okwamanje safike ngekhanda lmao kusadingeka ukudonsa ukuthi youtube video lol i CS C-130 kungenye indaba lol
Umsebenzisi alandelayo (s) wathi Thank You: FCAIR
Isikhathi ukudala page: 0.552 imizuzwana